Haween dhameeyay barashada harqaanka oo Dhuusamareeb loogu soo gaba gabeeyay | Dayniile.com
Home Warkii Haween dhameeyay barashada harqaanka oo Dhuusamareeb loogu soo gaba gabeeyay
Wasiiro ka tirsan Galmudug ayaa ka qayb galay munaasabad lacago iyo qalab kale lagu gudoonsiinayay haweyn Dhuusamareeb ku dhameystay barashada Xarqaanka.
Xarunta Waxbarashada Nabada iyo hormarinta ee Gaalkacyo oo gacan ka helaysa Hay’adda UNHCR ayaa Magaalada Dhuusamareeb tababar la xariira xirfada ku shaqeynta Xarqaanka oo socday mudo lix bilood ah maanta ugu soo xirtay 25 gabdhood oo laga soo kala xulay xeryaha ay ku jiraan dadka Barakacayasha ah ee danta yar iyo qoysaska saboolka ah.
Gabdhahaan ayaa madasha loogu soo xirayay tababarka waxaa ka qab galay Mas’uuliyiin ka socday Maamulka Degmada, Wasaaradaha Haweenka, arrimaha guddaha, waxbarashada, waalidiin iyo masuuliyiin kale waxaa lagu gudoonsiiyay madasha loogi soo xirayay Tababarkan 25 gabdhood Shahaado muujinaysa xirfada ay barteen, Qalabkii xarqaanka oo dhameystiran iyo lacag shan boqon oo doolar ah si ay shaqa abuur ugu samaystaan dhamantood.
Cabdinaasir Nuur Maxamuud oo ah madaxa Tababar ee Xarunta waxbarashada Nabada iyo hormarinta ee Gaalkacyo ayaa sheegay aqoonta hal abuurka wadata iyo dhaqaalahan yihiin kuwo ay ku kordhinayaan shaqo abuurka.
Xildhibaanad Canab Cosoble iyo Ahasan kamil mire agaasimaha waaxda Farsamada ee Wasaaradda waxbarashada Galmudug ayaa la dardaarmay Gabdhahan
Wasiir kuxigeenka shaqada iyo Arimaha Bulshada Maxamed nuur diini ayaa u mahadceshay Xarunt Waxbarashada Nabada iyo hormarinta ee galkacyo waxuuna ugu baaqay gabdhaha la baray xirfada inay ku shaqaystaan.
Previous articleHanti-dhowarka guud oo shaaciyey warbixinta baaritaanka maaliyadda laamaha dawladda federaalka
Next articleMarkii aysan waxba gacan kuugu jirin saaxiibadaana kooxi ay disho aadan waxba ka qaban karin,sida wasiir Dubble ayaa gacamaha leysi saartaa, sida Rooblana waxba kuma dhaamo
Dowladda Soomaaliya ayaa markii u horeysay ka hadashay diyaarado qiimo hoose ku iibineyso Kenya, kuwaasi oo ay lahaayeen ciidamada xoogga Soomaaliya. Taliyaha ciiddamada cirka Soomaaliya...
Somaliland oo sheegtay in musaafurin doonto dadka kasoo jeeda Koonfurta Soomaaliya...